Ingxelo ye-COVID-19-I Holland
I-Holland I-COVID-19 INtetho
Siyazi kwaye siyazingca ngendima ebalulekileyo esiyidlalayo kula maxesha anzima. Sibulela ngokungazenzisiyo koogxa bethu abakwicandelo lamayeza ehlabathi jikelele ngomsebenzi abawenzayo ukuxhasa unyango lo bhubhani. Sikunye nawe kwaye sifuna ukukwazisa malunga nendlela esijongene ngayo nolu celomngeni:
Okwangoku isebenza njengesiqhelo ngamaxesha akhokelela rhoqo nomthamo wethu awuchaphazelekanga. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukugcina kunye nokukhulisa esi sikhundla ukufezekisa iimfuno zakho.
Njeshishini, sele sithathe amanyathelo khusela abasebenzi bethuUkutshintsha indlela yokusebenza ukuze Gcina ukuqhubeka kwenkonzo. Ukuba ungathanda iinkcukacha ezithe kratya zolu khuseleko, ziyafumaneka kuxwebhu lomgaqo-nkqubo wethu.
Sihlala sinxibelelana rhoqo nabathengisi bethu abaphambili. Sibambelele kwisitokhwe esikhulu sezinto ezingasetyenziswanga ekwenzeni izixhobo zethebhulethi kwaye ezi zikhuselekile kwiinyanga ezininzi ezizayo.
Siyazi ukuba iinqwelomoya abakhweli ziyacinywa kwaye zithintelwe kwihlabathi liphela kodwa izinto zokuhamba ziyaqhubeka, kwaye ngoku sisithumela kwilizwe lonke. Siya kuzama ukufumana indlela eluncedo apho uthintelo lusebenza khona.
Inkampani igcina imeko yayo eyaziwayo yoMthengi, ke Siyakwazi ukukhawulezisa iimpahla zethu ngokukhuseleka kwisikhululo seenqwelomoya esivumela ukuhanjiswa kweeyure ezingama-24/48.
Ukuba usebenza kumayeza akhoyo asetyenziselwa ukunyanga i-COVID-19 siyakwenza nantoni na eyenzekayo ukuze uhambise izixhobo ozifunayo. Nceda unxibelelane nathi.
Ukuba usebenza kwiiprojekthi zokulwa ne-COVID-19 sikulungele ukunceda nangayiphi na indlela. Njeshishini, sinolwazi oludibeneyo lokuvelisa iicwecwe oluqhutywa kumakhulu eminyaka. Sifuna ukwenza ukuba oku kufumaneke kuwe. Nceda unxibelelane nathi.
I-Holland inethiwekhi yokuxhasa abathengi eyolula kwihlabathi liphela. Bahlala bekulungele ukukunceda kunye nokwenza lula kwakho.
Iiarhente zethu zobugcisa ziyafumaneka Iiyure ze-24 ngosuku kwiindlela ezahlukeneyo zonxibelelwano: umnxeba, i-imeyile, iMicrosoft Teams, Skype, GoToMeeting, WhatsApp, LinkedIn, WeChat…
Siyazi ukuba uninzi lwabantu bakho azizukubakho okanye basebenze ukude kwaye unokufuna ukuwela abasebenzi bezitimela kwaye ufundise abasebenzi abatsha ukufezekisa iimfuno zemveliso. Siphuhlisile eyethu inkqubo yoqeqesho online Ukufikelela kwezi mfuno kwaye singathanda ukwenza ukuba oku kufumaneke mahala kuwe. Nantoni na esinokuyenza ukuxhasa ukuqhubeka kwemisebenzi yakho iya kwenziwa.
Njengoko uyazi, la ngamaxesha aguqukayo kwaye njengoko iimeko zitshintsha, siya kukugcina uhleli. Siyazingca ngomsebenzi wethu kunye nomzi mveliso wethu. Sisonke siza kwenza umahluko.
Umlawuli weNtengiso kunye noThengiso
Mna Holland Ltd.